समुन्द्र पारि Archives - Page3of 11 - Current Nepal News
असोज १३,काठमाडौं। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार एकैदिन पाँचवटा शव आइपुगे। चारवटा मलेसियाबाट आएका थिए भने एउटाचाहिँ कतारबाट। वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर कफिनमा फर्किएका यी पाँचमध्ये एक थिए, आइतसिंह गोले। मलेसियामा विषाक्त रक्सी सेवनले असोज ९ मा मृत्यु भएका ६ मध्ये आइतसिंह एक थिए। आठ वर्षअघि मलेसिया गएका पति नफर्किएपछि पत्नी डोल्मामाया आफैँ चार वर्षअघि त्यहाँ गएकी थिइन्। सर्लाही हिरापुर–९ का आइसिंह अवैध कामदारका रूपमा बसेका थिए। डोल्मा वैध रूपमा बसेकी थिइन्। केहीअघि [विस्तृतमा...]
भदौ २७,काठमाडौं। यूरोपेली मुलुक स्पेनमा नेपाली दूतावास स्थापना भएको सात महिना वितिसकेको छ, तर दूतावासको अवस्था भने लथालिङ छ। मुख्य कार्यालय (चान्सरी) भवन र राजदूत निवास एकै ठाउँमा हुँदा दूतावासको काम कार्वाही अस्तव्यस्त बनेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले चान्सरी भवन र राजदूत निवासका लागि ९ हजार युरो पठाएको भएपनि कार्यालय राजदूत निवासमै खुम्चिएको छ। सो मुलुकका राजदूत भरत रायमाझीले निवासका लागि ५ हजार र चान्सरी भवनका लागि ४ हजार ५ सय यूरो माग गरेपनि कार्यालय [विस्तृतमा...]
घर फर्किन पाएनन् ५० हजार चेली !
भदौ २०,काठमाडौं। गैरआवसीय नेपाली सघ एनआरएनए को कार्यक्रममा दुबई आएका श्रम मन्त्रालयका उपसचिव विपीन आचार्यलाई नेपाली महिलाले घेरे। र, सोधे, लौ भन्नुहोस्, हामीलाई कुन कानुन् प्रयोग गरेर घर फर्किनबाट रोक्नुभयो। आचार्य अलमल्ल परे। उनीहरुले प्रश्न बर्साइरहे, के हामीलाई सरकारले देशमै ५०-६० हजारको जागिर दिन सक्छ ? सक्दैन भने किन हाम्रो मुख थुन्छ ? किन बाटो छेक्न ? किन खुसी लुट्छ ? उनीहरु रहेछन् दुवईमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदार। सरकारले डेढ बर्षदेखि महिलाला घरेलु कामदारको श्रम स्वीकृत [विस्तृतमा...]
पाकिस्तानमा पहिलो महिला मुख्य न्यायाधीश
भदौ १७,काठमाडौं। पाकिस्तानको न्यायिक इतिहासमा ताहिरा सफ्दर त्यहाँको उच्च अदालतको पहिलो महिला मुख्य न्यायाधीश बनेकी छन्। उनले मुख्य न्यायाधीशको रूपमा बलोचिस्तान उच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेकी छन्।पाकिस्तानको कानुनी समुदायले उच्च अदालतमा पहिलो महिला मुख्य न्यायाधीशको रूपमा ताहिरा सफ्दरको बढुवाको स्वागत गरेको छ। यात्रा पाकिस्तानमा उच्च तहमा पुरुष न्यायाधीश थुप्रै भएपनि थोरै महिला मात्र माथिल्लो तहमा छन्। सफ्दरको बढुवा न्यायपालिकामा रहेको लैङ्गिक असमानता सम्बोधन गर्ने पहिलो [विस्तृतमा...]
अमेरिकाको फ्लोरिडामा अन्धाधुन्ध गोली चल्यो
भदौ ११,काठमाडौं। अमेरिकाको फ्लोरिडामा अन्धाधुन्ध गोली चल्दा दुई जनाको ज्यान गएको छ। बन्दुधकारीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा ११ जना घाइते भएका छन्। फ्लोरिडास्थित ज्याकसोनभिल्लाको मनोरञ्जन कम्प्लेक्समा भिडियो गेम चलिरहेका बेला गोली चलेको हो। ज्याकसोनभिल्ला फ्लोरिडाको ठूलो किनमेल, मनोरञ्जन तथा डाइनिङ कम्प्लेक्स हो। गोली हान्ने व्यक्ति डेभिड काट्ज नामका २४ वर्षीय युवक भएको खुलेको छ। बीबीसीका अनुसार बाल्टिमोरका उनले गोलाबारीपछि आफैंलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्। गेममा हार [विस्तृतमा...]
प्रधानमन्त्री निवास छाडे इमरान खानले, महंगा कार पनि लिलाम गर्ने
भदौ ५,काठमाडौं। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्री निवास छाडेका छन्। खान सोमबारबाट तीन वटा बेडरुम भएको सामान्य घरमा बस्न थालेका हुन्। उनले आफूसँग सैन्य सुरक्षाका साथै दुई कामदार लगेका छन् । जबकी प्रधानमन्त्री निवासमा कर्मचारी मात्र ५२४ जना थिए। सरकारी खर्च कम गर्ने आफ्नो पूर्व योजना अनुसार नै खानले प्रधानमन्त्री निवासमा नबस्ने निर्णय लिएका हुन्। खानले बानागालास्थित आफ्नै घरमा बस्न चाहेका थिए। तर, सुरक्षा एजेन्सीहरुले त्यहाँ सुरक्षा खतरा रहेको बताएपछि सैन्य [विस्तृतमा...]
विमान दुर्घटना: अद्‍भूत रूपमा बाँचे बालक
साउन २८,काठमाडौं। ईण्डोनेशियामा आठ जनाको ज्यान जानेगरी भएको एउटा विमान दुर्घटनाको भग्नावशेषमा एकजना १२ वर्षीय बालक जीवितै फेला परेका छन्। घटनास्थलबाट प्राप्त तस्वीरहरूमा ती बालक होसमा रहेको र क्यामरामा हेरिरहेको देख्न सकिन्छ। पपुआ न्यू गिनीसँगको सीमानजिकै रहेको एउटा पहाडी क्षेत्रमा आइतवार बिहान विमानको भग्नावशेषसँगै उनी फेला परेका हुन्। गर्जन स्वीट्जरल्याण्डमा निर्मित पिलाटुस विमानको उडिरहेको अवस्थामै, एउटा विमानस्थलमा अवतरण गर्नु केही बेरअघि, शनिवार दिउँसो एअर ट्राफिक [विस्तृतमा...]
नोबेल पुरस्कार बिजेता नायपालको निधन
साउन २७,काठमाडौं। नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वीएस नायपालको निधन भएको छ। उनको ८५ वर्षको उमेरमा लण्डनस्थित आफ्नै घरमा निधन भएको बीबीसीले पारिवारिक स्रोतलाई उल्लेख गर्दै समाचार लेखेको छ। उनलाई सन् २००१ मा साहित्य तर्फको नोबेल पुरस्कारले सम्मानित गरिएको थियो। पुरस्कार पाएपछि सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्ना पुर्खा नेपालबाट आएको हुनसक्ने बताएका थिए। भारतीय मूलका नायपालको जन्म १९३२ मा ट्रिनिडाडमा भएको थियो। ट्रिनिडाडमा हुर्किएका उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए। ‘द [विस्तृतमा...]
गृहमन्त्री थापा इण्डोनेसिया जाँदै
साउन २०,काठमाडौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ‘मानवतस्करी, बेचविखन र अन्तरदेशीय अपराध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन इण्डोनेसियाको बाली जादै छन्। उनी आइतबार बेलुका ९:३० बजे इण्डोनेसिया प्रस्थान गर्दैछन्। साउन २१ र २२ गते चल्ने सातौ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा बिभिन्न देशका गृहमन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरु सहभागी हुँदै छन्। गृहमन्त्री थापाले साउन २२ गते सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेपालसहित चीन, भारत, अस्ट्रेलिया लगायत ४५ सदस्य राष्ट्र र संयुक्त [विस्तृतमा...]
भेनेजुएलाः ‘ड्रोन हमलामा जोगिए राष्ट्रपति’
साउन २०,काठमाडौं। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मडुरोले कराकसमा एउटा कार्यक्रममा टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष सम्बोधन गरिरहँदा ड्रोन विस्फोट भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। विस्फोटमा उनलाई कुनै चोटपटक नलागे पनि सातजना सैनिक घाइते भएका छन्। सञ्चारमन्त्री खोर्खे रोड्रिगेजले राष्ट्रपतिको ज्यान लिने उद्देश्यका साथ विस्फोट गराइएको बताएका छन्। खुला मैदानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति मडुरोले भाषण गरिरहँदा उनीसहित कार्यक्रममा सहभागी अरूले अचानक माथि हेरे र उनीहरू तर्सिए। [विस्तृतमा...]